Ciyaarta horyaalka ee Chelsea V Bayern - BBC News Somali
Ciyaarta horyaalka ee Chelsea V Bayern
19 Maajo 2012
Image caption Chelsea iyo Bayern Munich
Frank Lampard waxaa uu ku adkaysanayaa rajada ay ka qabaan qaadista horyaalka Yurub ee ciyaarta ugu dambaysa ay isaga hor imanayaan kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo lagu ciyaarayo garoonkeeda, Allianz Arena.
Lampard waxaa uu yiri' haddii aan isku-kalsoonaanno isla markaana aan diiradda saarno ciyaarta oo rabitaanka guusha, wixii ay rabaab ha soo daayeen Bayern Munich'.
Waxaa uu sheegay Lampard in faa'iidada ay qabto Bayern ay tahay in gurigeeda lagu dheelayo hase ahaatee aanay taasi wax badan u dhimi doonin kooxdiisa, oo ciyaartan uu isagu kabtan u yahay.
Ciyaartani waxay kaloo qiima gaar ah u leedahay tababaraha kumeelgaarka ah ee kooxda Chelsea, Di Matteo, oo haddii uu qaado koobka horyaalka Yurub ay u badan tahay inuu shaqo joogto ah ka helo milkiilaha kooxda, Roman Abramovich.
waa ciyaar aad u adag waxayna labadan kooxood soo reebeen kooxaha ugu xoogga badan adduunka ee Barcelona iyo Real Madrid oo labaduba ka tirsan dalka Spain.